Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tiorkia, Tonizia ary Egypt no tompon'andraikitra amin'ny krizy fizahan-tany any Bulgaria?
Tombananay ny fihenan'ny fahatongavan'ireo mpizahatany amin'ny vanim-potoana fahavaratra 3% ka hatramin'ny 6% ho an'ny firenena manontolo ary eo anelanelan'ny 5 sy 8% ho an'ny moron'ny Ranomasina Mainty,
biolgara Ny minisitry ny fizahantany Nikolina Angelkova dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa ny fahatongavan'ireo fizahan-tany any amin'ny faritra Black Sea dia andrasana hidina 3-6% amin'ity fahavaratra ity.
Nilaza ny minisitra Angelkova fa nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2018 ny minisitera fa ho fotoan-tsarotra tokoa izany, miaraka amin'ny fanamby maro.
Ny minisitra dia manome tsiny an'i Torkia, Tonizia, ary Egypt noho ny fidinana an-trano, miampanga azy ireo ho nanohana ny indostrian'ny mpitsidika.
Nanazava ny minisitra: "Manangana rafitra manokana hanohanana ny fizahan-tany voalamina izahay."
Nanontaniana ny minisitra Angelkova fa nanototra ny fihemorana ankehitriny noho ny toe-java-misy ara-jeopolitika. “Sehatra ara-toekarena mifaninana tokoa ny fizahantany, ary miankina amin'ny fomba hanatonana azy io. Misy toe-javatra sarotra, saingy mandray fepetra izahay handresena izany. Miasa amin'ny vanim-potoana 2020-2021 izahay. ”
Ny fampahalalana momba ny fizahantany Bulgaria dia hita ao amin'ny bulgariatravel.org/